Maxaa kasoo baxay kulankii Golaha Ammaanka QM uu ka yeeshay Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kasoo baxay kulankii Golaha Ammaanka QM uu ka yeeshay Soomaaliya?
Maxaa kasoo baxay kulankii Golaha Ammaanka QM uu ka yeeshay Soomaaliya?
New York (Caasimada Online) – Ergeyga Xoghaya Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan, oo maanta warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya siinayay Golaha Ammaanka QM, ayaa sheegay in horumar laga sameeyey siyaasadda Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay weli ku tahay halis amaanka Soomaaliya, isla markaana ay xafiiska QM ee Somaliya ee UNSOM uu diwaan geliyay sanadkan 2021-ka 708 qof oo rayid ah oo rabshadaha Soomaaliya wax ku noqday. Dadkaas ayuu sheegay in 321 ka mid ah ay dhinteen, 387 kalena la dhaawacay.